Archive du 20191230
Hetsiky ny mpanohitra Niatrana am-bava basy ny fanjakana
Tamin’ny 11ora teo no tonga tetsy amin’ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana ny kandida Rina Randriamasinoro sy ny delegasionina niaraka taminy ny sabotsy lasa teo,
Filoha sy ny ekipany Hifety be any Frantsa…
Re fa lasa any andafy ny filoha Rajoelina mianakavy. Mikarakara hetsika ao Parisy ka ao amin’ny efitrano lehiben’ny Unesco izy ireo no hanao izany.
Olivier Rakotovazaha « Tsisy adihevitra fa antsika ireo nosy ireo »
« An’i Madagasiakara ny nosy Eparses » araka ny nambaran’ny antoko MFM.
Fiaraha-miasa amin’ny iraisam-pirenena « Isika no nametraka fepetra », hoy Imbiki Herilaza
«Napetraka ny vina izay navadika ho politika ankapoben’ ny fanjakana. Iaraha-mahalala fa ny 65% ny tetibolam-panjakana dia miantoka amin’ny famatsiam-bola avy any ivelany.
Fitsarana ny raharaham-pifidianana Ho ara-politika fa tsy araka ny lalàna…
Sarotra ny fandidiana ho an’ny fitsarana misahana ny ady ifanaovana amin’ny fanjakana miantsoroka ireo fitoriana momba ny fifidianana ben’ny tanàna.
Filoha Rajoelina Vonon-kiaro ny lalàmpanorenana tokoa ve ?
Araka ny voafaritry ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ho amin`ny taona 2020 dia tsy maintsy hiroso amin`ny fanaovana fitsapan-kevi-bahoaka
Nanompa ny Filoha Mpanao “facebook” iray voasambotra
Tratra tany Toliara i Godfroy Randria, mpikirakira tambajotra “facebook”, izay voalaza fa nanompa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
XV Makian’i Madagasikara Tsara ny vokatra tamin’ ity taona ity
Niisa 11 ireo fifaninanana iraisam-pirenena nandraisan’ i Madagasikara anjara nandritra ity taona ity.
Nihemotra isika e!
Fotoana fohy dia hivalona ny taona 2019. Samy manana ny hamehezana azy ny isam-batan’olona,
Dinam-pokonolona « Hampanarahina ny lalàna »
Anisan’ny lalàna mbola mamefy ny fiarahamonina malagasy ireny antsoina hoe « dinam-pokonolona » ireny na dinam-paritra.
VOLA TEO ALOHA Mbola manan-kery hatramin’ny rahampitso
Betsaka sahady ireo olona tsy mety mandray intsony ireny karazam-bola nivoaka tamin’ny taona 2003 -2004 ireny efa ho tapa-bolana izao.
Fanamboarana ny EPP ao Vohemar Ny 60%n’ny asa no efa vita
Ny 60 % ny asa no efa vita amin’ny fanamboarana ny EPP manarapenitra any amin’ny disitrikan’i Vohemar, faritra Sava, raha ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana.
Famonjena voina mandritra ny fety Hampitombona avo roa heny ny ekipa
Na dia efa niasa mafy aza ny sampana mpamonjy voina etsy Tsaralalana nandritra ny fetin’ny Noely teo dia mbola hiasa mafy
Mikiky karatra dia mahazo volabe Fanambakana sy fanabadoana…
Miparitaka amin’izao ny karazana lalao miendrika fitadiavam-bola amin’ny fomba mora eto Antananarivo.
Haingon’ny tanàna eto Iarivo Nalain’ny mpangalatra sahady
Misy mangalatra sahady ireo haingon’ny tanànan’Antananarivo napetraky ny Fitondram-panjakana sy ireo jiro manazava ny tanàna ho enti-miady amin’ny asan-jiolahy.
Kaporaly Albert azo sambo-belona Nampangirifiriana 3 andro avy eo novonoina
Kalvary no mahalaza ny fangirifiriana nahazo ny kaporaly Albert, tratran’ny dahalo sambo-belona tany amin’ny sisin-tanin’i Tsiroanomandidy sy Miandrivazo, ny talata teo tamin’ny 8 ora sy sasany maraina.
Soanierana Ivongo Mianadahy maty nihotsahan’ny tany
Ankizy mpianadahy ahitana zazavavy kely 2 taona antsoina hoe : Fitia sy Fetra zazalahy kely 5 taona no indray maty tototry ny tany ny faran’ny herinandro teo.
Halatra solika Mpiasan’ny Jirama 9 tratra
Nitrangana halatra solika tao amin'ny tobim-pamokarana herinaratry ny Jirama Ambositra ny zoma lasa teo.